युवाका लागि खेलकुद अझै भएको छैन: थापा -
अखिल नेपाल राष्ट्रिय खेलकुद महासङ्घका संयोजक: पृथ्वी थापा
खेलकुद क्षेत्रका लागि छुट्टै राजनीतिक सङ्गठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय खेलकुद महासङ्घ बनाउनुपर्ने आवश्यकता किन महसुस गर्नुभयो ?
– नेपाली खेलकुदमा थुप्रै समस्या छन् । खेलकुदका ती सबै समस्याको हल त सत्ताले गर्ने हो । तर पनि यसमा खबरदारी गर्ने, त्यसको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउने र हाम्रोतर्फबाट सकिनेजति समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर यो महासङ्घ गठन भएको हो ।
० यो त खेलक्षेत्रमा राजनीति घुसाएको भएन र ?
– हामी सबै खेलकुद क्षेत्रमा राम्रो हुनुपर्छ भनेर चाहन्छौँ । यस क्रममा खेलकुदमा राम्रो व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने चाहना राख्दै यस क्षेत्रका विभिन्न समस्याको समाधान गर्न तत्पर रहन आवश्यक ठान्यौँ । तर, राजनीतिका नाममा अन्य थुप्रै दलका नेता हुनुहुन्छ, जसको खेलकुद क्षेत्रसित कुनै साइनो छैन । भ्रातृ सङ्गठन बनाउने र त्यसको नेतृत्व गर्ने गर्नुभएको छ । उहाँहरूको खेलकुदमा लगाव होइन, खेलकुदको नाममा सत्ताको लाभ लिने र खेलकर्मीमाथि शासन गर्ने चाहना देखियो । हामी त्यस्तो होइनौँ । हामीले लामो समय खेलकुदमा बितायौँ । हामी लागेको यस खेलकुद क्षेत्रको समस्या देखेपछि यसलाई समाधान गर्न लागिपरेका हौँ । यस क्रममा हामीलाई विश्वास लाग्ने साथीहरू मिलेर हामीलाई विश्वास लाग्ने राजनीतीमा हाम्रो आबद्धता हुन पनि सक्छ ।
० एउटा खेलाडीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा देशको अवस्थालाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?
– विकराल, खराब र इमान्दार खेलकर्मीमाथि निहित स्वार्थ बोकेका व्यक्तिहरूको रजाइँको केन्द्रको रूपमा राखियो । यसलाई तोड्नुपर्छ भन्ने नै हो ।
० नेपाली खेलकुद क्षेत्रका समस्याहरू केकस्ता छन् भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
– मैले अघि नै भने नि, सत्ताले खेलकुदलाई खेलकुदजसरी नै हेरेन । यो भएपछि त हजारौँ समस्या हुन्छन् नि, जुन यहाँ भनेर साध्यै छैन ।
० खेलकुद के हो : व्यायाम वा मनोरञ्जन या अरू केही ?
– विज्ञानको एउटा पाटो
० वर्तमान राज्यको खेलकुद नीतिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
– मैले भने नी खेलकर्मीलाई ठुलो भाषण ठोकेर भ्रममा राखेर पार्टीका कार्यकर्ता पोस्ने माध्यमभन्दा राज्यको कुनै खेलकुद नीति नै देखिँदैन ।
० नेपालको खेलकुदमा सर्वाधिक सम्भावना बोकेको खेल कुन हो भन्ने ठान्नुहुन्छ र किन ?
– सबैको सम्भावना छ । यसमध्ये पनि मार्सल आर्टको सर्वाधिक सम्भावना छ; किनकि, यो नेपालीको स्वभाव सुहाँउदो खेल हो ।
० नेपाली खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सफलता प्राप्त गर्न के कस्ता कदम उठाउनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ ?
– अघिदेखि तपाईंले साधेको प्रश्नको जवाफ एउटै हो– खेलकुद खेलकुद नै जसरी चल्नुप¥यो । यसपछि त सबै समस्याको समाधान भइहाल्छ नि ।
० यतिखेर क्रिकेट खेल सर्वाधिक चर्चित भइरहेको छ । तर एक थरि पर्यवेक्षकहरू भने यो खेललाई पुँजीपतिको वस्तुव्यापार बढाउने उद्यम ठान्दछन् । यसमा सत्यता छ र ?
– त्यसो होइन । सबै खेलका आफ्ना आफ्ना पाटा हुन्छन् । क्रिकेटले नेपालको साखलाई बढाएको साँचो हो । तर, पछिल्लो समय नेपालको खेल भनेकै क्रिकेटलगायत केही टिम गेम त हो नि भन्ने सोच धेरैले राख्ने गरेको पाइएको छ । यो चाँहि अत्यन्त गलत हो ।
० तपाईंहरूले कुनै बेला रेसलिङ प्रतियोगिता पनि आयोजना गर्नुभयो । रेसलिङलाई पनि खेल मान्न सकिन्छ र ?
– यो भन्दा वैज्ञानिक खेल धेरै हुन सक्थे । यो पूर्ण वैज्ञानिक नहुन सक्छ । तर, यसलाई हाम्रो सिक्ने क्रमको अपरिपक्वता हो भनेर बुझ्नुभए पनि हुन्छ ।
० नेपालको राष्ट्रिय खेल पहिले डन्डीबियो थियो । त्यसलाई परिवर्तन गरेर पछि भलिबल बनाइयो । यो अवस्थामा डन्डीबियो खेलको संरक्षण गर्न के गरिपर्दछ भन्ने लाग्दछ तपाईंलाई ?
– डन्डीबियो खेल प्रतिस्पर्धात्मक खेलभन्दा बढी सांस्कृतिक खेल थियो । यसकारण यसलाई जोगाउने प्रयास हामीले सबै प्रकारको प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्दा ठिक हुन्छ, जुन हाम्रा संस्किृतिका अन्य पाटा जोगाउनका लागि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
० अहिलेको राष्ट्रिय खेल भलिबल गाउँ गाउँमा व्यापक छन् । यसको स्तरोन्नतिका लागि सरकारबाट के कस्ता काम भइरहेका छन् । यस खेलको थप विकासका लागि के गरिनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ तपाईंलाई ?
– भलिबल मात्र होइन, सबै खेलमा एउटै कुरा हो । खेलकर्मीले नै खेल सङ्घ चलाउनुपर्छ भन्ने हो । सरकारबाट जति हुनुपर्दथ्यो, पहिलो कुरा त्यति भएको छैन । सरकारी मान्छेको नियत सफा हुनुप¥यो । त्यसपछि त अरू कुरामा बहस हुन सक्छ । नियत विदेश घुम्ने, तारेहोटलमा भात खाने र पैसा कमाउनेभन्दा बढी नभएकाले खेल चलाएको देशमा भलिबल मात्र होइन, सबै खेलमा उही समस्या हुन्छ । यो सत्ता भएसम्म नेपालको कुनै खेलको स्तरोन्नति हुने सम्भावना छैन; किनकि उहाँहरूको प्राथमिकता नै यो होइन ।
० पछिल्लो समयमा नेपाली खेलाडीहरूले क्रिकेट र फुटबलमा पनि राम्रो प्रगति गरेका छन् । यसको स्तरोन्नतिका लागि राज्यले के कस्ता कदम उठाउनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ ?
– मैले एउटै कुरा भनेँ, पहिलो कुरा त नियत सफा हुनुपर्छ । सबै कुराको स्तर बढ्न देशमा मूलधारको राजनीतिमा मान्छेले सत्ता छाड्नुपर्छ । उहाँहरूको असली नियत देखेका छौँ । हामी नियत सफा राख्नुपर्छ भन्छौँ । उहाँहरूको नियत सफा हुने सम्भावना बागमतीमा सफा र कञ्चन पानी बग्नुजस्तै हो । राज्यले गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त काम भनेकै राज्यले चलाउनेले राज्य चलाउन छाड्नु हो । अन्य सबै कुराको स्तरोन्नति यही कुराले मात्र सम्भव छ । फेरि तपाइले अर्को कुरामा स्तरोन्नति गर्न के गर्नुपर्छ भनेर नसोधे पनि हुन्छ ।
० खेल खालि बालक र युवाका लागि भए । प्रौढ तप्काका लागि पनि कुनै खेलको विकास गरिनुपर्दछ भन्ने यहाँलाई लाग्दैन ?
– बालक र युवा नभई कोही बुढा त हुँदैनन् । बालकदेखि विकसित भएपछि र युवामा विकसित भएपछि बुढाका लागि केही न केही केही गर्नुपर्यो । आफै विकास भइहाल्छ । अहिले बालक र युवाका लागि धेरै भए भन्ने भ्रममा तपाईं हुनुहुन्छ । त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस् । नेपालको खेल रङ्गशालामा खेल्ने खेलाडीका लागि भन्दा बढी मन्त्री, सदस्य सचिव, यिनका भरौटे, परिषद्का अधिकारीका लागि भएको छ । युवाका लागि खेलकुद अझै भएको छैन । खेल कुनै युवाका लागि भएको छ भने मन्त्रीका छोरा र सदस्य सचिवका छोराका लागि भएको छ । अरू त बुढाकै लागि भएको छ । हुन त आफूले खेलेर जित्ने ‘बा’ ले गरेर जितेको भन्ने खेलाडीहरू भएको देशमा धेरै कुराको अपेक्षा गर्न पनि कठिन हुन्छ ।
० अखिल नेपाल राष्ट्रिय खेलकुद महासङ्घका आगामी कार्यक्रमहरू के कस्ता छन् ?
– हाम्रो बृहत भेलाले आगामी कार्यक्रम तय गर्ने छ । अहिले मैले व्यक्तिगत रूपमा केही भन्नुभन्दा हामी औपचारिक रूपमा यो कुराको जानकारी गराउने छौँ ।
० अन्तमा नयाँ दिशाको तर्फबाट उल्लेख गर्नुपर्ने केही विषय वा प्रसङ्गहरू छन् कि ?
– हामी नेपालीले साना लोभले सत्ताको चाकडी गर्दा जिन्दगी लुटाइरहेका छौँ । मासुपसलमा मासु भाग लगाएर बेचे झैँ हाम्रा जिन्दगीका दिन, महिना, वर्ष भाग लगाइदै बेचिएका छन् । यसरी हाम्रै अगाडि हाम्रै जिन्दगीको जिन्दगीको व्यापार गर्नेहरू खेल क्षेत्रमा पनि छन् । पहिलो त हामी नागरिक हौँ । यसबापत हाम्रो हक होला । यसपछि हामी लागेको क्षेत्रमा पनि हाम्रो हक होला । यसको खोजी गरौँ । कमसेकम हाम्रो जीवनको व्यापार गर्ने व्यापारीको गुलामी र चाकडी गर्न त छाडौँ ।